गायिका इन्दिरा जोशीले गरिन इन्गेजमेण्ट, को हुन त उनका प्रेमी? – Eps Sathi
September 24, 2021 1118
काठमाडौं । चर्चित गायीका इन्दिरा जोशीले सबैलाई अचम्ममा पार्दै इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन। उनले इंगेजमेन्ट गरेको भिडियो राखेर धेरैले सा’माजिक सं’जालमा बधाइ दिएपछि वास्तविकता खुलेको हो । इन्दिराले खुम्बु पुगेर इ’न्गेजमेन्ट गरेकी हुन् । जोशीले आफ्नो प्रेमीलाई औँठी लगाइदिएको भि’डियो अहिले टि’कटकमा भा’इरल भइरहेको छ । उनले फेशन डिजाइनर शरद केडियासँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् । इन्दिराले यसअघि आफू प्रे’म सम्बन्धमा रहेको बताउने गरेपनि प्रे’मीको नाम भने खुलाएकी थिइनन् ।
उसो त उनले इन्गे’जमेन्ट भएकोबारे पनि आफैँले सा’र्वजिनक रूपमा अहिलेसम्म भनेकी छैनन् । उनीहरूको इन्गे’जमेन्ट भएको भि’डियो भने क्याप्टेन विवेक थापाको टि’कटक अ’काउन्टमार्फत सा’र्वजनिक गरिएको छ । थापाले ’ए’क्स्कुलुजिभ’ लेखेर भिडियो सा’र्वजनिक गरेका छन् ।
गायिका जोशीले सोबारे औपचारिक रुपमा भने कतै जानकारी दिएकी छैनन् । उनले इंगेजमेन्ट गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सं’जालमा जताततै छाएको छ । गायिका जोशीलाई क्याप्टेन विवेक थापाले टि’कटकमा भि’डियो राखेर बधाइ दिएका छन् । उक्त भिडियो अहिले भा’इरल बनेको छ ।
उनले जोशी र केडिया दुवैलाई बधाइ दिएका छन् । क्याप्टेन थापाले भिडियोको क्याम्पसनमा लेखेका छन्, ‘दुवै जनालाई उज्वल भविष्यको कामना !’गायिका जोशीले यसअघि नै प्रेममा रहेको बताएकी थिइन् । तरपनि उनले आफ्नो प्रेमीबारे भने खुलाएकी थिइनन् ।
Prevआउने भयो न्यादी हाइड्रोपावरको आइपिओ, हेरौं कहिलेबाट खुल्दैछ?
Nextछुसकपछि कोरियामा फै’लियो को’रोना, आज एकैदिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सं’क्रमित